သားရေဖိနပ်မှခြစ်ဖယ်ရှားခြင်းနည်းစနစ် | Bezzia
မာရီယာဟိုဆေး Roldan | | ဖိနပ်
သင်ဟာသားရေဖိနပ်ကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုမှဒီပစ္စည်းရဲ့သက်တောင့်သက်သာနဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကိုမနှစ်သက်ဘူးလား။ သားရေဖိနပ်ကြောင်းဖိနပ်ဖြစ်ကြသည် သူတို့သည်ကြာမြင့်စွာတည်နေကြလိမ့်မည် သူတို့နေသမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် သူတို့ကိုဂရုစိုက်ရန်သင်သိသည်။ လူများစွာသည်ဤပစ္စည်းအမျိုးအစားများအတွက်ငွေများစွာမသုံးသောကြောင့်တုပသားရေဖိနပ်များကို ၀ ယ်ရန်ငွေကိုပိုသုံးလိုကြသည်၊ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့သည်နောင်တရ။ ကုန်ကျစရိတ်များသည့်တိုင်ကောင်းသောသားရေဖိနပ်များကို ၀ ယ်ကြသည်။
သားရေဖိနပ်သည်အခြားဖိနပ်အမျိုးအစားများထက် ပို၍ စျေးကြီးသော်လည်း၊ အကယ်၍ သင်သည်ထိုငွေကိုဖိနပ်ပေါ်တွင်သုံးစွဲမည်ဆိုပါကအနည်းဆုံးသင့်ကိုကြာရှည်စွာခံထားရလိမ့်မည်။ သင်သိသောသားရေဖိနပ် သူတို့သည်သင့်ကိုသစ္စာမဖျက်ကြ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာပထမပြောင်းလဲမှုမှာမချိုးဖျက်နိုင်ဘူး။ သားရေကအမြဲတမ်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစတိုင်လ်ကနေထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။
5 သူတို့ကိုသန့်ရှင်းပြီးခြစ်ရာ - အခမဲ့စောင့်ရှောက်ရန်
သားရေဖိနပ်များသည်သင့်ကိုအအေးဒဏ်မှအလွန်ထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးအမြဲတမ်းသက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ဖိနပ်ဖြစ်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဖိနပ်စီးရန်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဤဖိနပ်သည်သင့်အတွက်ဖြစ်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ သငျသညျအချိန်ကြာမြင့်စွာသားရေဖိနပ်ရှိသည့်အခါနှင့် ဝတ်ဆင်သို့မဟုတ်ခြစ်ကြည့်ဖို့စတင်သည်ပစ္စည်းကိုတိကျစွာဂရုစိုက်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ရယူခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည် မင်းရဲ့ဖိနပ်အသစ်ကိုပြန်ကြည့်ရအောင် သူတို့ကိုပထမဆုံးနေ့ကဲ့သို့ပျော်မွေ့ပါ၊
သားရေဖိနပ်များပေါ်တွင်ခြစ်ရာများသည်မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိပြီးပွတ်တိုက်ငယ်လေးတစ်ခုသည်ထိုဖိနပ်များပေါ်တွင်အရုပ်ဆိုးသောအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံလမ်းသွားလမ်းလာသူတစ် ဦး ၏သတိမဲ့မှုမှလမ်းပေါ်တွင်ရိုးရိုးရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုသည်သင်၏ဖိနပ်ကိုပျက်စီးစေရန်လုံလောက်သည်။ သို့သော်ကံကောင်းထောက်မစွာဤဖိနပ်အမျိုးအစားကိုသင်၏ဖိနပ်ပေါ်တွင်ကုသရန်လွယ်ကူသည်။ ပြီးတော့သင်ကသူတို့ကိုဖျောက်ထားနိုင်တယ် ကွဲပြားခြားနားသောကုသမှုနှင့်အတူ။ ဒါပေမယ့်သင်ဘယ်လိုသားရေဖိနပ်အပေါ်ခြစ်ဖယ်ရှားပစ်သလဲ?
ဖိနပ်ပေါ်ရှိခြစ်ရာများသည်နူးညံ့သည့်အခါအနည်းငယ်ပါဝင်သောအထည်ကိုသုတ်ရန်လုံလောက်ပေလိမ့်မည် ဟင်းရွက်ဆီ ရုံခြစ်ရာအထက်။ သားရေသည်ဆီကိုစုပ်ယူပြီးခြစ်ရာများပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ သင်၌အမှတ်အသားများသို့မဟုတ်ခြစ်ရာများရှိပါက၎င်းဝတ်ဆင်မှုကိုဖုံးကွယ်ရန်အတွက်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်၏ဖိနပ်ပေါ်ရှိခြစ်ရာများကိုမှတ်သားထားပါကသားရေ၏အရောင်ပြောင်းလဲမှုမည်သို့ပင်ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ဒီကိစ္စမှာ, ခရမ်းချဉ်သီးကို Lanolin ဖြင့်သုတ်နိုင်သည်, သားရေပျော့ပြောင်းနှင့်ဖိနပ်၏ခြစ်ရာကိုဖုံးကွယ်ဖို့အနား၏ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာ။
အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင် lanolin သည်သားရေကိုအနည်းငယ်မှေးမှိန်စေနိုင်သောကြောင့်အဝတ်အထည်နှင့်အတူgentleရိယာများကိုပင်ဖယ်ထုတ်ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရလိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်ငါပြောခဲ့တာတွေအပြင်သားရေဖိနပ်ပေါ်မှာခြစ်ရာတွေကိုကုသဖို့လှည့်ကွက်တွေလည်းရှိတယ်။ သင်သူတို့ကိုသိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်နှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေမည့်လှည့်ကွက်တစ်ခုကိုသာသင်ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ က) ဟုတ်တယ် သင်ဖိနပ်ကိုသန့်ရှင်းသပ်ရပ်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်းနှင့်လုံးဝသန့်ရှင်းသောအသားအရေဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည် အသေးစိတ်မဆုံးရှုံးပါနှင့်!
သူတို့ကိုသန့်ရှင်းပြီးခြစ်ရာ - အခမဲ့စောင့်ရှောက်ရန်
နှင့်ပွတ်ပေးပါ ခဲဖျက် သင်၏ဖိနပ်မျက်နှာပြင်ကိုပျက်စီးစေသောအစွန်းအထင်းများနှင့်အမှတ်အသားများ
အနည်းငယ် Apply သွားတိုက်ဆေး အမှတ်အသား၏ကျန်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာ။ သွားတိုက်ဆေးကိုသားရေဖြင့်ပျော့ပျောင်း။ သန့်ရှင်းသောအထည်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်အစွန်းအထင်းကိုသုတ်ပါ။
ကြပါစို့ ဖန်သန့်ရှင်းရေးအနည်းငယ်ပေါက်ပါ သို့မဟုတ်ခေါင်းမာပြီးအစွန်းအထင်းများပေါ်၌အက်တတွန်ကင်းသည့်လက်သည်းဆိုးဆေးကိုဖယ်ရှားပြီးတစ်မိနစ်အကြာတွင်ဖန်သန့်ရှင်းရေးကိုဝါဂွမ်းဖြင့်ဖယ်ထုတ်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ရေနှင့်စိုစွတ်သောရေမြှုပ်တစ်ကောင်နှင့်ကျန်ရှိနေသေးသောမည်သည့်အစွန်းကိုမဆိုဖျက်ပစ်ပါ။ သို့သော်ရေမစိုပါစေနှင့်။ သားရေများကိုမခြစ်ရန်သတိပြုပါ။ သွေ့ခြောက်သောအထည်ဖြင့်အစိုဓာတ်ပိုလျှံခြင်းကိုသုတ်နိုင်သည်။
အနည်းငယ်ထည့်ပါ ရေနံဂျယ်လီ, ဓာတ်သတ္တုရေနံ, ဒါမှမဟုတ်သံလွင်ဆီ သားရေဖိနပ်၏ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသတွင်နှင့်ပျော့သောအထည်နှင့်အတူသန့်ရှင်းရေး။
အထည်ကိုဖြည်းဖြည်းနှင့်လွတ်လပ်စွာရွေ့လျားပါ။ မည်သည့်အပိုပစ္စည်းကိုမဆိုသုတ်လိမ်းပြီးဖိနပ်တွင်အဆီပြန်ပါ ၀ င်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ခြစ်ရာများကိုနောက်ထပ်ကွဲအက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီးခြစ်ရာများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
ပြီးနောက်နှင့်နောက်ဆုံး သင်ဖိနပ်တွင်ဖိနပ်အချို့ကိုထည့်နိုင်သည် သားရေ၏အရောင်နှင့်ကိုက်ညီပြီးခြစ်ရာများသို့မဟုတ်အက်ကြောင်းများပေါ်တွင်ဝါဂွမ်းဖြင့်ပွတ်ပါ။
ဆောင်းပါး၌ဤအချက်ကိုဖော်ပြပြီးသောအခါသင်၏သားရေဖိနပ်များကိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေရှိစေရန်သင့်အားငါပေးသောဖြေရှင်းနည်းများကိုသင်မကျေနပ်ပါကကျွန်ုပ်၏လက်များအနေဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေဆဲ ဖြစ်၍ သင့်ကိုအိမ်ငှားပေးလိုသောကြောင့်စိတ်မပူပါနှင့်။ သင်၏ဖိနပ်ပေါ်တွင်ခြစ်ရာများသို့မဟုတ်တွန့်ခြင်းများကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီးသင်လုပ်နိုင်သည် အများကြီးကြာကြာသင်၏ဖိနပ်ခံစားပါ။
ခွက်တစ်ခွက်ကိုရေ ၅၀%၊ ၅၀% ဖြူရှလကာရည်နှင့်ရော။ မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာအထည်၏ထောင့်ကိုနှစ်မြှုပ်ပါ။ ထိုအခါ အစွန်းအထင်းပေါ်မှာအထည်၏ဤအပိုငျးနှငျ့ပွတ်ပေးပါ သင်၏ရှူးဖိနပ်ကိုထို့နောက်စိုစွတ်သောအဝတ်ဖြင့်တဖန်ဆေးကြောပြီးလျှင်တတိယခြောက်သွေ့သောအထည် (မိုက်ခရိုဖိုက်စ်) ဖြင့်ခြောက်သွေ့ပါ။
သံပုရာဖျော်ရည်သည်လည်းအလွန်ကောင်းပါသည် သားရေဖိနပ်အပေါ်ခြစ်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ, သို့သော်သင်အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားသင့်တယ်ပြီးတော့သင်အနည်းငယ် Vaseline ပြန့်နှံ့အလွန်ကောင်းစွာခြောက်သွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ပုံ » ဖိနပ် » သားရေဖိနပ်မှခြစ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို